अरुण–३ शिलन्यासबारे प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रीसँग गल्ती स्वीकारे - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जेठ ०१, २०७५ 6477 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना शिलन्यासक्रममा विभागीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई नबोलाएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती स्वीकार गरेका छन् ।
९ सय मेगावाटको आयोजना पुनको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत शुक्रबार शिलन्यास गरेका हुन् । आयोजना लगानी बोर्डले सहजीकरण गरे पनि ऊर्जाका दृष्टिले मन्त्री पुनको ‘प्रोटोकल (हैसियत)’ उच्च हुन्छ ।
उक्त पक्ष बेवास्ता गरेको भन्दै मन्त्री पुनले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भेटेर प्रश्न राखेका थिए । ओलीले यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको र सचिवहरूका कारण गल्ती भएको स्वीकार गरे । दुवै पार्टीको सहकार्यमा सरकार बनेकाले आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोरिने पनि उनले बाचा गरे ।
नेपालको यति ठूलो परियोजना निमार्ण अघि बढिरहँदा विभागीय मन्त्री सहभागी नहुँदा आफूलाई आश्चार्य लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया थियो । प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकारेकाले आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नआउने मन्त्री पुनले बताए ।
‘एउटा अरुणमात्र होइन देशमा दर्जनौं ठूला आयोजना निर्माण चरणमा छन्, निर्माण गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पुनलाई उध्रित गर्दै प्रेस संयोजक रोशन खड्काले भने, ‘विद्युत उत्पादन गरेर देश समृद्ध बनाउने सबैको लक्ष्य तथा योजना हो । सोहीअनुरूप आगामी दिनमा काम अघि बढ्नेछ ।’
अरुण शिलन्यासका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली तथा मोदीको भ्रमण व्यवस्थापन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएको थिएन । बोर्ड र मन्त्रालयबीच लामो समयदेखि बढ्दै आएको दूरीलाई अरुणको शिलन्यासले थप टाढा पुर्याएको टिप्पणी भएको छ ।
उता प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा बोर्डले गत बैशाख २० गते आफ्नै ऐनविपरित अरुण निर्माण गर्ने सतलज जलविद्युत निगमलाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ । अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने कानुनी अधिकार विद्युत ऐन, २०४९ ले मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
अरुण शिलान्यासको विषयमा मन्त्री पुनमात्र नभई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ । प्रचण्डले पनि यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्ने बताइएको छ ।